UPVC T1110 guddi derbiga - Shiinaha Hubei Shengyu Dhismaha Qalabka
Shengyu UPVC panelt derbiga waa fursad cusub oo loogu talagalay dhismaha cladding derbiga. Waxaa la soo saaray by 3 lakabka technology co-extrusion. Waa adag, waara oo midab khafiifa iyo, ka sii wanaagsan tahay bir iyo sheet galvanized. More muhiim ah, oo waa inuusan marna miridhku doonaa park warshadaha culus. Our guddi derbiga UPVC waa adkaysi u acids, fangaska iyo qoyaan leh tayo caan ah. Waxaa weli deggan waxqabadka jirka ah ee -40ºC in 80ºC. waxqabadka anti-daxalka ee guddi derbiga UPVC haboon applic ugu waa ...
FOB Price: 2.99-7.99 / mitir oo laba jibbaaran
Shengyu UPVC panelt derbiga waa fursad cusub oo loogu talagalay dhismaha cladding derbiga. Waxaa la soo saaray by 3 lakabka technology co-extrusion. Waa adag, waara oo midab khafiifa iyo, ka sii wanaagsan tahay bir iyo sheet galvanized. More muhiim ah, oo waa inuusan marna miridhku doonaa park warshadaha culus.
Our guddi derbiga UPVC waa adkaysi u acids, fangaska iyo qoyaan leh tayo caan ah. Waxaa weli deggan waxqabadka jirka ah ee -40ºC in 80ºC.
waxqabadka anti-daxalka ee guddi derbiga UPVC ku haboon yahay codsiyada ugu badan ee xeebaha leh daxalka ceeryaanta cusbo daran, iyo meelaha la wasaqowga hawada u daran, gaar ahaan aagga warshadaha kiimikada.
1.5mm, 2.0mm, 2.5mm, 3.0mm 1110mm 1050mm 800mm Sida loo baahan yahay 3.2-6.0KG / ㎡ dhalaalaya White, Blue
Previous: ASA UPVC sheet saqafka jiingado W1025
Next: sheet daylighting FRP TT980
Panel Clear PCV saqafka
Fiber Guddiyada saqafku dumo
Guddiyada Greenhouse Maro adag
Guddiyada Maro adag ningax
Guddiyada Maro adag Light
Guddiyada Maro adag caaga
Guddiyada Maro adag uu saqafku dumo
Guddiyada FRP dahaaran
Guddiyada FRP Waayo, Sale
Guddiyada FRP Wall
Glass saqafka Guddiyada Qiimaha
Guddiyada caaga Greenhouse
Greenhouse Guddiyada saqafka
Guddiyada saqafku dahaaran
Guddiyada Doolaal Maro adag
Guddiyada saqafku caaga
Guddiyada saqafka PCV
Guddiyada saqafku jiingado translucent
Guddiyada uu saqafku translucent Maro adag
Transparent Guddiyada saqafka Maro
Guddiyada saqafku Transparent
temperatuer High & saqafka iska caabin ah daxalka ...
Dardaro ASA sheet saqafka cusbi RY720-A